Listings in တယ်လီဖုန်းလိုင်းစနစ် တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း and ကုန်မာပစ္စည်းနှင့် သံထည်ဆိုင်များ | Mandalay Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Mandalay | Mandalay Yellow Pages
Listings in တယ်လီဖုန်းလိုင်းစနစ် တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း and ကုန်မာပစ္စည်းနှင့် သံထည်ဆိုင်များ
Showing 12 of 800 results
in ကုန်မာပစ္စည်းနှင့် သံထည်ဆိုင်များ, ရေစုပ်စက်ပြုပြင်ရေး, ရေစုပ်စက်နှင့် အပိုပစ္စည်း, ရေပိုက်နှင့် အပိုပစ္စည်းများ, ရေသန့်စက်
အမှတ် ၇၅၊ (၂၅)လမ်း၊ ၈၃လမ်း နှင့် ၈၄လမ်း ကြား၊, ,
02-4036307 , 02-4036310
in ရေချိုးခန်းနှင့် အိမ်သာသုံးပစ္စည်းများ, အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်များ, ဘိလပ်မြေ, ကုန်မာပစ္စည်းနှင့် သံထည်ဆိုင်များ, ကြွေပြားများ
MOTHER GROUP OF COMPANIES
အမှတ် ယ-၉/၁၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ မြဝတီမင်းကြီးလမ်း ထောင့်၊ ကျွဲဆည်ကန်၊, ,
09-2039655 , 09-2039844
in ပုလင်းခွံမျိုးစုံနှင့် ပစ္စည်းဟောင်း ရောင်းဝယ်ရေး, ကုန်မာပစ္စည်းနှင့် သံထည်ဆိုင်များ
၈ရလမ်း၊ (၂၁)လမ်းနှင့် (၂၂)လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာစံ၊, ,
??-??????? , ??-???????
??-???????, ??-???????, ??-???????
in ကုန်မာပစ္စည်းနှင့် သံထည်ဆိုင်များ
အမှတ် ၇၃၊ (၂၅)လမ်း၊ ၈၃လမ်းနှင့် ၈၄လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4069890 , 02-4060225
02-4069890, 02-4060225, 09-255777709, 02-4067369, 09-43807777, 09-33807777, 09-91004339
in အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်များ, ထုတ်ကုန်၊ သွင်းကုန် လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများ, စားသောက်ကုန်များ, ကုန်မာပစ္စည်းနှင့် သံထည်ဆိုင်များ, နို့မှုန့်
FU XING BROTHERS GROUP OF COMPANIES
အမှတ် ၂၇၅၊ ၈၁လမ်း၊ (၂၄)လမ်း နှင့် (၂၅)လမ်း ကြား၊, ,
02-4021977 , 02-4032990
in အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်များ, ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ, ကုန်မာပစ္စည်းနှင့် သံထည်ဆိုင်များ
အမှတ် ဠ-၉/စ၊ ၆၂လမ်း၊ (၁၁၇)လမ်း နှင့် (၁၁၈)လမ်းကြား၊, ,
09-2004375 , 09-2022311
in အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်များ, ဘိလပ်မြေ, ကုန်မာပစ္စည်းနှင့် သံထည်ဆိုင်များ
အမှတ် ဝ-၁၀/၈၃၊ သာယာဝတီမင်းကြီးလမ်း၊ ၆၄လမ်း နှင့် ၆၅လမ်း ကြား၊ က-ရပ်ကွက်၊, ,
09-5026154 , 09-965026154
အမှတ် လလ-၂၉/၁၁၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း၊ ၅ရလမ်း နှင့် ၅၈လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-2020102 , 02-5153835
in ကုန်မာပစ္စည်းနှင့် သံထည်ဆိုင်များ, စက်နှင့် စက်အပိုပစ္စည်း
၈၁လမ်း၊ ၂၂လမ်း နှင့် ၂၃လမ်း ကြား၊, ,
02-4023236 , 09-2058214
in အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်များ, ကုန်မာပစ္စည်းနှင့် သံထည်ဆိုင်များ
A.D Co., Ltd. (Solo Agent)
အမှတ် ၈၄၊ မြေညီထပ်၊ ဒေါ်သိန်းတင်လမ်း၊ ကန်တော်ကလေးဆေးခန်းအနီး၊, ,
01-394396 , 01-394698
01-394396, 01-394698, 01-394414, 09-5502773, 09-5502773, 09-5187113
အမှတ် လလ-၈/၁၊ ၆၂လမ်း၊ မက္ခရာလမ်း ထောင့်၊ ကနောင်မင်းသားကြီးတောင်ဘက်တစ်ပြ၊, ,
09-788832888 , 09-788853888
အမှတ် ၇၅၊ ၂၅လမ်း၊ ၈၃လမ်း နှင့် ၈၄လမ်း ကြား၊, ,
02-4036307 , 02-4030700
၅၅လမ်း၊ မနော်ဟရီလမ်း မြောက်ဘက်၊ မြရည်နန္ဒာ၊, ,
09-403636657 , 09-968673693
အမှတ် ဝ-၇/၁၁၅၊ ၆၈လမ်း၊ ဝေသာလီဘုရားလမ်းနှင့် သာယာဝတီမင်းကြီးလမ်းကြား၊ က-ရပ်ကွက်၊, ,
09-960004700 , 09-2004914
09-960004700, 09-2004914, 09-402714988
in ကုန်မာပစ္စည်းနှင့် သံထည်ဆိုင်များ, ကိရိယာတန်ဆာပလာများ
အမှတ် ၁၅/အေ၊ (၂၄)လမ်း၊ ၈ဝလမ်း နှင့် ၈၁လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060121 , 02-4071543
02-4060121, 02-4071543, 09-2038033, 09-450042135
၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ၈၃လမ်း နှင့် ၈၄လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
09-91034970 , 09-259061827
အမှတ် ပပ-၁၀/၅၊ ၆၂လမ်း၊ သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း နှင့် ယောမင်းကြီးလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5153711 , 09-5082540
02-5153711, 09-5082540, 09-785082540
in မီးစက်၊ထရန်စဖော်မာ ပြုပြင်ရောင်းဝယ်ရေး၊ အငှား, ကုန်မာပစ္စည်းနှင့် သံထည်ဆိုင်များ
Ar Man Trading Co.,Ltd.
ရဝလမ်း၊ မြဝတီမင်းကြီးလမ်း နှင့် ဆင်ဖြူရှင်လမ်း ကြား၊ က-ရပ်ကွက်၊, ,
09-263320088 , 09-263701609